No Justice In Ethiopia: Gaaffii ta’uu baatus yaadumatti akka qabannuufi – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsNo Justice In Ethiopia: Gaaffii ta’uu baatus yaadumatti akka qabannuufi
1- Lamiroot Kamaaliin namni mana hidhaatti argee beeku jiraa ??
2- Mana hidhaa isa kam keessaatti hidhamtee jirtii ??
3- Lamiroot mana hidhaa jirti moo lubbuu ishee baraaruuf worra itti fayyadamee Haacaaluu ajjeesisetu dhoksee kaa’eera ??
4- Qaamni mana murtiitti Laamirootiin deddeebisu kun qaama mana hidhaa isa kamidhaa ??
5- Gartuun amma Laamirootiin bilisa baasiseef gartuun deebisee hiisise kun eenyuufaatii ??
6- Gartuun Lamirootiin miliqsuudhaaf jedhee tikni of dhoksee (under cover) bifuma konkoolaataa ittiin dhaqanii Haacaaluu ajjeessan kan wal fakkaatu qabatanii mana murtii fuulduratti eegaa kan turan gartuu kamidha ??
7- Maaliif Laamiroot qofaan yakka kana keessatti himatamtee?? Waan suurri ishee mul’ateefii ?? Ishumatu jalqabee ishumatu yakka hangas ga’u xumuree ??
Worri Haacaaluutti gandaanis ykn artiinis ykn dantaanis itti dhitaatan muraasni immimmaan Naachaa boo’aa turan diraama kana qopheessuuf milkeessuu keessatti qooda dhoksaa qabaachaa kan turan har’a ifatti gananii PP jala kan fiigan itti milkaayaniitti
U-turn gochuu hin danda’ani.
Bifuma wal fakkaatuun worri Juwaar Mohammed waliin walitti dhufeenya adda addaa qabaachaa turan hedduun isaanii gananiiru ( very close friends), garuu hanga ammaatti lubbuu isaa basuutti hin milkoofne malee, yaaliin isaanis akkuma itti fufetti jira, kanaaf yoo Oromoon jabaate ni milkaawa yoo laafe garuu hiriyyaa gantuutu itti milkaawa.
Ammas “Abyi Must Go” jechuudhaan rakkoon Oromoo hin furamu, har’a Nafxanyaanis Oromoonis Abyi gadhiisee Lamma Magarsaa aangoo haa qabatuu jechaa jiru, Nafxanyaanis Oromoonis maaliif kana barbaadanii ?? Rakkoo Oromoo furuuf moo rakkoo Itoophiyaa furuuf ??
Rakkoon Oromoo sirna buqqisuutiin malee nama angoo irratti wal jijjiiruutiin hin furamu.
Oromoon dogogora seenaa hin hojjetiina .
Diinni keenya eenyudhaa ??